संविधानमा फेरि धर्मको विवाद ! - संविधानमा फेरि धर्मको विवाद !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २० कार्तिक, 10:53:12 PM
२०७६ सालपछिको कालखण्डमा वर्तमान संविधानमा ‘आनको तान’ हेरफेर हुने कारण
केही रहस्यमय घटनाक्रम :-
‘श्रीपेच गायब भएन स्थापित भयो’ :- गएको दशैँ फूलपातीको पूर्वसन्ध्यामा सबै चाडपर्व मनाउन तल्लिन थिए । राजधानीबाट २५ लाख मानिस उपत्यका छोडेर घरतिर लागेका थिए । त्यही मौका छोपेर सरकारले राजतन्त्रजन्य श्रीपेच, राजगद्दी, रानीले लगाउने टायरा (मुकुट), राजदण्ड आदि राजतन्त्रका पहिचानलाई स्थापित ग¥यो । कुनै प्रचण्ड दबाबलाई टार्न नसकेपछि बिर्सिँदै लगेको राजतन्त्रको पहिचान स्थापित भयो । राजावादीहरूको उत्साहको पारो बढेको प्रतिक्रिया सुनियो, “श्रीपेच, राजदण्ड, टायरा आदि गायब होलान् भन्ने डर थियो । अब स्थापित भए । देशमा श्रीपेच छ भन्ने प्रमाणित भयो । श्रीपेच तयार छ, त्यो कसले कतिबेला लगाउने भन्नेमात्र अबको सवाल हो ।”
भनिरहनु नपर्ला भा.ज.पा. को अनुदारवादी प्लेटफर्म तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग अझ बढी आबद्ध सरकारका मन्त्रीहरू नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउने कुरामा कुनै पनि हालतमा बिलम्ब गर्नुहुँदैन भन्ने दबाब दिइरहेका छन् । हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाको अर्थ हो राजतन्त्र फर्किनका लागि टेक्न बनाइने धरातल ।
उता नेपाली काँग्रेसका निर्वाचित महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले त्यही समयको तालमा आफ्नो कुरा दोहो¥याए, “हिन्दुराज्य कायम गर्नुपर्ने नेपाली जनताको आवाजको कदर हुनुपर्छ…..।” उता भारतमा सत्तारुढ भा.ज.पा. र उसको गठबन्धन पक्ष २०१९ को आमनिर्वाचन अनुदारवादी हिन्दुत्वको प्लेटफर्ममा लड्दैछन् भन्ने किटानीका साथ काँग्रेसका प्रभावशाली नेता शशी थरूरले केही दिनअघिमात्र एउटा लेख नै लेखेका थिए । भनिरहनु नपर्ला भा.ज.पा. को अनुदारवादी प्लेटफर्म तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग अझ बढी आबद्ध सरकारका मन्त्रीहरू नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउने कुरामा कुनै पनि हालतमा बिलम्ब गर्नुहुँदैन भन्ने दबाब दिइरहेका छन् । हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाको अर्थ हो राजतन्त्र फर्किनका लागि टेक्न बनाइने धरातल ।
गणतन्त्र आएपछि कुनै राष्ट्रपति पनि गणतन्त्रका प्रतिक वा संस्था वा सर्बोच्च अधिकारी बन्न सकेनन्, राष्टप्रमुखको जुत्ता लगाएर राजतन्त्रको पदचिन्हमा हिँड्न मात्र खोज्ने राजतन्त्रका अनुयायी सावित भए । झन गएको दशैँको टीका लगाइदिँदा निरंकुश राजतन्त्रका पालामा पनि नदेखिएको घुँडा टेकेर राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपतिको टीका थाप्नुपर्ने हुकुमी राजतन्त्रको भन्दा कठोर वातावरणले राष्ट्रपतिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दियो । यसले गर्दा आमजनताको सहज मानसिकतामा ‘योभन्दा त संवैधानिक राजतन्त्र धेरै उत्तम’ भनी सोच्ने आधार तयार भईदियो ।
तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ को ब्याख्या गर्दै नयाँ संविधानले ‘सनातनदेखि मानी ल्याएको धर्म र संस्कृतिको राज्यले रक्षा गर्ने’ उल्लेख गरेर संविधानले ‘धर्मनिरपेक्ष’ बाट हिन्दुराज्यको गन्तब्यमा आफ्नो यात्राको प्रस्थान द्वार खोलेजस्तो छ ।
यो संविधानमा राज्यमा धर्मको हैसियतबारे अस्पष्ट, गोलमटोल र प्रतिबद्धताविहिन ब्यहोरा राखिएको छ । वास्तबमा यो संविधानबाट कस्तो नेपाल बनाउन खोजेको हो, प्रष्ट हुनुको सट्टा संविधान आफै द्विविधाले ग्रसित देखिन्छ । संविधानको धारा ३ मा नेपाललाई ‘बहुधार्मिक राष्ट्र’ भनी परिभाषित गरिएको छ । धारा ४ मा गएर ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ भनी उल्लेखित छ । ‘बहुधार्मिक’ अस्तित्वलाई राष्ट्र पहिचानको आधारका रुपमा संविधानले स्विकारेको छ ।
तर राज्यले ‘धर्मनिरपेक्ष’ भएर धर्मसँग वैधानिक चिनजान र सरोकार नभएको घोषणा गर्छ । हेक्का रहोस्– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली शब्दकोशमा ‘निरपेक्ष’ को अर्थ कुनै कुराको वास्ता नराख्ने, बेवास्ता, उपेक्षा, सम्बन्धदेखि मुक्त लेखिएको छ । तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ को ब्याख्या गर्दै नयाँ संविधानले ‘सनातनदेखि मानी ल्याएको धर्म र संस्कृतिको राज्यले रक्षा गर्ने’ उल्लेख गरेर संविधानले ‘धर्मनिरपेक्ष’ बाट हिन्दुराज्यको गन्तब्यमा आफ्नो यात्राको प्रस्थान द्वार खोलेजस्तो छ ।
मुसलमानका लागि पनि आपत्तिजनक भइरहेको क्रिश्चियन दबदबा :-
धर्म परिवर्तन र ईसाईकरणको उग्र गतिविधि चलिरहेको छ । माओवादी कम्युनिस्ट नेता मोहन वैद्य समेत “साम्राज्यवादी (क्रिश्चियन) धर्म आउनु भन्दा हाम्रै धर्म भएको ठीक” (१७ कार्तिक ०७५ को नयाँ पत्रिका) भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ०७५ को दशैँमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हातको टीका लगाउन लामबद्ध भएका करिब डेडसय मुसलमानहरूको प्रतिक्रिया सुन्नुहोस्, “नेपाल हिन्दुराज्य भयो भने हामी अल्पसंख्यक मुसलमानको रक्षा गर्ने दायित्व उनीहरूकै हुन्छ । यो क्रिश्चियनले त संसारभरि मुसलमानलाई मार्ने काम मात्र गरिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो नजदिकमा क्रिश्चियन होइन हिन्दु नै छ । हामी त्यही भावना देखाउन यहाँ टीका थाप्न आएको ।”
नर्वेका राजकुमार हाकुम माग्नुस संविधान निर्माणकै क्रम (०६८ मंसिर ५) मा नेपाल आउँछन् । उनलाई चिन्नेले नेपालमा इसाई धर्म विस्तार र धर्म परिवर्तनका लागि लगानी गराउने युरोपेली तत्वका प्रमुख प्रमोटर र समन्वयकर्ता भनेर जान्दा रहेछन् । नेपाल बसाईमा उनले इच्छा जाहेर गरे, “म यहाँका आदिवासीहरूलाई भेट्न चाहन्छु ।”
कतिपय इस्लाम धर्मावलम्बीहरू भाषण र नारामै भनिरहेका छन्, ‘मुसलमानका लागि त यो नेपाल हिन्दुराज्य भएकै बेश । हिन्दुराज्य हुँदा हामी नेपाली मुसलमानलाई देशविदेशमा हिन्दुराज्यका अल्पसंख्यक इस्लाम धर्मावलम्बी भनेर महत्व र सरोकारका साथ खातिरदारी हुनेगथ्र्यो । धर्मनिरपेक्ष राज्य भएपछि हामीले त्यो गुमाएका छौँ ।’ जामे मस्जीदका इमाम (पूजारी) शकील अहमद एक प्रेस अन्तर्वार्तामै भन्छन्, ‘नेपाल हिन्दू राष्ट्र भए पनि (हामीलाई) फरक पर्दैन’ (हे.घटना र विचार सा. ०७१–६–२९ को अंक) ।
नर्वेका राजकुमार हाकुम माग्नुस संविधान निर्माणकै क्रम (०६८ मंसिर ५) मा नेपाल आउँछन् । उनलाई चिन्नेले नेपालमा इसाई धर्म विस्तार र धर्म परिवर्तनका लागि लगानी गराउने युरोपेली तत्वका प्रमुख प्रमोटर र समन्वयकर्ता भनेर जान्दा रहेछन् । नेपाल बसाईमा उनले इच्छा जाहेर गरे, “म यहाँका आदिवासीहरूलाई भेट्न चाहन्छु ।” ‘संवैधानिक संवाद केन्द्र’ नामक एक गैरसरकारी संस्थाको अन्तरक्रियामा पनि उनी सरिक भए, जुन संस्थाले संविधानसभामा जनजातिको ‘ककस’ मा लगानी गरेको थियो । आखिर धर्मनिरपेक्षतालाई सेवा पु¥याउने खालको संघीयताको खोजी र विवादकै कारण अघिल्लो संविधानसभा असफल भएर चिहानमा पुगेको थियो ।
राजकुमारको मुलुक नर्वेको संविधान, धारा २ मा स्पष्ट उल्लेखित छ, “इभान्जेलिकल लुथरन (इसाई) धर्म राज्यको औपचारिक धर्मका रुपमा रहने छ । यहाँका निवासीहरू यसको अमल गर्दै आफ्ना छोराछोरीलाई सोही अनुरुप हुर्काउन अनुबन्धित हुन्छन् ।’ डेनमार्कको संविधान हेरौँ, त्यस्तै छ । संविधानको भाग १ धारा ४ मा भनिएको छ, “इभान्जेलिकल चर्च डेनमार्कको स्थापित चर्च हुने छ र राज्यद्वारा सोही अनुरुप सम्पोषण गरिने छ ।” युरोपका धेरै राष्ट्रका संविधानमा यस्तै भावना पाउन सकिन्छ । फेरि प्रश्न उठ्छ, कतिपय युरोपेली मुलुक नेपालको नयाँ संविधानलाई उनीहरूको संविधानकै कार्बन कपी बनाउने धृष्टता त गरिरहेका छैनन् ?
यो पनि हेर्नुहोस् तमासा !
संविधानको मस्यौदाबारे प्राप्त भएका करिब २ लाख जनमत र सुझाबमध्ये अधिकांश जनताले ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने शब्द हटाउन र हिन्दू, बौद्ध, किँरात, शिख, जैन आदि धर्मावलम्बीका निष्ठा र आस्थाको कदर हुने उपयुक्त शब्द राख्ने माग हुन्छ । अर्कातिर, मस्यौदा संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष र धर्म त्याग्ने स्वतन्त्रताबारेको प्रावधान हटाउलान् कि भन्ने शंका र चिन्ताले झस्काउँछ, नेपालीलाई होइन, बेलायतको ‘चर्च अफ स्कटल्यान्ड’ लाई । संविधान बनाउने क्रममा तत्कालीन बेलायती राजदूत एण्डी पाक्सर््ले सभासदहरूलाई लेखेको खुलापत्रमा किन यसो भनेका रहेछन् भनी बुझ्न तब जटिलता नहोला– “हामी संविधानमा धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तपाईँ (सभासद) हरूलाई प्रोत्साहित गर्दछौँ ।”
माथि उल्लेखित राजकुमारको मुलुक नर्वेको संविधान, धारा २ मा स्पष्ट उल्लेखित छ, “इभान्जेलिकल लुथरन (इसाई) धर्म राज्यको औपचारिक धर्मका रुपमा रहने छ । यहाँका निवासीहरू यसको अमल गर्दै आफ्ना छोराछोरीलाई सोही अनुरुप हुर्काउन अनुबन्धित हुन्छन् ।’ डेनमार्कको संविधान हेरौँ, त्यस्तै छ । संविधानको भाग १ धारा ४ मा भनिएको छ, “इभान्जेलिकल चर्च डेनमार्कको स्थापित चर्च हुने छ र राज्यद्वारा सोही अनुरुप सम्पोषण गरिने छ ।” युरोपका धेरै राष्ट्रका संविधानमा यस्तै भावना पाउन सकिन्छ । फेरि प्रश्न उठ्छ, कतिपय युरोपेली मुलुक नेपालको नयाँ संविधानलाई उनीहरूको संविधानकै कार्बन कपी बनाउने धृष्टता त गरिरहेका छैनन् ?
नेपाली काँग्रेस होस् वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), मधेसी दल र अन्य धेरैजसो साना दलका नेतृत्व तह र समग्र ¥याङ््क एण्ड फायलमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध र अधिकांश जनताले मानेको धर्मको पक्षमा भावना रहेको पाइन्छ । कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुर के.सी.का शब्दमा “यस मुद्दाले सबैको मनमा सिस्नोले पोलेजस्तो भएको छ, तर पनि पीडा पोख्न सकिरहेका छैनन् ।” उनीहरू के कारणले त्यो भावना प्रकट गर्न सकिरहेका छैनन् , अचम्मै छ । दासहरू सत्य बोल्न पनि डराउँछन् भन्ने कहावत सम्झिने हो भने गणतन्त्रका संचालक र संविधान निर्माताहरूको दासी मानसिकताको छायाँ र प्रभाव नयाँ संविधानमा पर्ने जोखिम देखिन्छ ।
प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउनु हुँदैन । पार्टीहरूले प्यास मेटाउन विष पिएका छन् । यो संविधान बनाउनमा अनेक धातुका हात पसे । संविधान लेखनमा तिनै अपरिचित हातहरू रहे, जसको अनुहार देखिन्न । जसको अनुहार देखियो, उनीहरूका हातै रहेन । दूषित नियतले जतिसुकै परिवर्तनकारी संविधान लेखिए पनि त्यसको नतिजा सुखद हुँदैन ।
आखिर कसको लागि नेपालले ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ हुनुपरेको र मौलिक हकमा धर्म त्याग्ने स्वतन्त्रता राख्नुपरेको ? धेरै वर्ष भएको छैन, योग्य र असल शिक्षकका रुपमा कत्तारमा कार्यरत शिक्षक दोर्जे गुरुङ्लाई त्यहाँको ७ कक्षाको विद्यार्थीले इस्लामको अपमान गरेको फत्तुर लगाएको भरमा उनीबिरुद्ध मुद्दा चलाईयो, थुनियो र धर्मरक्षाका नाममा हुर्मत लिनुसम्म लिएर आखिर नेपाल फर्काइयो । के नेपाल हिन्दू राज्यकै रुपमा रहँदा पनि यस्तो अमानवीय र अधर्मी ब्यवहार कुनै इसाई वा मुसलमान वा अन्य धर्मावलम्बीले कुनै दिन भोग्नुपरेको थियो ?
गणतन्त्रको घोषणापछि संविधानसभामा अंग्रेजी लोककथाको ‘प्याण्डोरा बाकस’ खोलियो, जुन बाकसबाट मुलुकले त्यसअघि नदेखेका अनेकौँ संकट र अशान्तिका बान्कीहरू बाहिर निस्केर राष्ट्रको अस्तित्वको मूल्यमा आपूmभन्दा ठूलो भाग खोज्न थाले । नेपाल हिन्दुराज्य हुँदा पनि कसैलाई निसासिँदो अवस्था र कष्ट थिएन, तर आज यसैलाई समस्या र विवादको विषय बनाइदैछ ।
प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउनु हुँदैन । पार्टीहरूले प्यास मेटाउन विष पिएका छन् । यो संविधान बनाउनमा अनेक धातुका हात पसे । संविधान लेखनमा तिनै अपरिचित हातहरू रहे, जसको अनुहार देखिन्न । जसको अनुहार देखियो, उनीहरूका हातै रहेन । दूषित नियतले जतिसुकै परिवर्तनकारी संविधान लेखिए पनि त्यसको नतिजा सुखद हुँदैन । ‘ऋषि मन’ ले लेखिएको मात्र संविधान कालजयी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । यो संविधानमा आमूल परिवर्तनको दिनगिन्ती शुरू भइसकेको तर्क दिने हो भने त्यो अतिशयोक्ति हुँदैन ।
२०७५, २० कार्तिक, 10:53:12 PM